Ogaden News Agency (ONA) – Mudaharaadyo Waawayn Oo Gobolka Tigray Gilgilay & Xiisado Gobolkaas Kataagan.
Mudaharaadyo Waawayn Oo Gobolka Tigray Gilgilay & Xiisado Gobolkaas Kataagan.
Posted by Dulmane	/ April 28, 2016
Waxaa shalay Arbacadii taariikhduna ay ku beegnayd 27/4/2016 ayaa Gobolka Tigray ee dhaca woqooyiga Ethiopia kadhacay mudaharaadyo aad uwaawayn oo socday mudo dheer. Mudaharaadkan oo ahaa mid ay dadwayne aad u tiro badan kasoo qayb galeen ayaa gilgilay guud ahaan Gobolka Tigray gaar ahaan caasimada gobolkaas ee Maqale.
Banaan baxan ay qoomiyada Tigray ee lagu tuhmayo talada wadanka wado waxaa soo qabanqaabiyay ururada bulshada iyo dhalinyarada Tigray waxayna sheegeen in taladii wadanka ay maroorsadeen shakhsiyaad macangag ah kuwaasoo dhaqaalihii wadanka kunaas nuujinaya ashkhaas maalqabeen ah iyo siyaasiyiin hore oo dhaqaalaha wadanka saamayn wayn ku leh.
Dadka shacabka ah ee dibad baxa ka qayb qaatay ayaa sheegay in uu wadanku marayo meel halis ah iyagoo sheegay in uusan jirin dhamaan adeegyadii bulshada sida caafimaadka, waxbarashada iyo ganacsiga waxayna ku andacoodeen in uu dhaqaalihii wadanku galay jeebka dad yar oo talada maroorsaday.
Ardayda jaamacadaha Gobolka Tigray ayaa wada dadaalo ay doonayaan in ay talada Gobolka Tigray iyo guud ahaan talada wadankaba wax kabadalaan waxayna bilaabeen kacdoon kadhan ah xukuumada kali taliska ah ee kooxda TPLF.
Sida aan lawada socono waxaa guud ahaan wadanka Ethiopia kasocda dibad baxyo ay samaynayaan dadka shacabka ah ee mudada dheer kuhoos jiray taliska macangaga ah ee kunaaxay dhiiga dadka kuhoos nool. Gobolada ay mudaharaadadu kasocdaan waxaa kamid ah Oromia, Gambela, Shucuubta Koonfureed iyo Gobolka Axmaarada, sidoo kale waxaa kusoo biiray oo indhawaalaba kacsanaa Gobolka Tigrey oo hada mudaharaadyo rabshado wata ay kasocdaan.
Ciidanka gumaysiga Ethiopia ayaa dhamaan banaan baxayaasha u adeegsaday awood mulatari ( military ) si ay u cabudhiyaan rabitaanka shacabka waxayna gumaadka ugu badan kagaysteen Gobolka Oromia oo bilihii lasoodhaafay ay kaceen malaayiin shacab ah oo in badan cabudhsanaa. Dhinaca kale ciidanka gumaysiga ee kusugan dhulka Ogadenia ayaa shan jibaaray dhibaatada ay shacabka S.ogadenia kuhayaan waxayna si aan qarsi lahayn ula wareegayaan hantida dadka shacabka ah.
Sikastaba ha ahaatee waxaa si isku mid ah u kacay Shucuubta dulmanayaasha kuhoosjira Rajiimka kaligii taliska ah ee talada wadanka xooga ku haysta waxayna shacabku bilaabeen dagaalo af iyo adinba ah si ay isaga tuuraan heeryada saaran.